Akriso+Sawiro:-Doorashada Koonfur Galbeed iyo Dareenka dadka (Warbixin) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Akriso+Sawiro:-Doorashada Koonfur Galbeed iyo Dareenka dadka (Warbixin)
Xaalado isbiirsaday oo ka jira Baydhabo, ayaa kiciyay dareenka dadka, kuli waxaa ku beermay walaac ay sabab u tahay Dowladda dhexe oo ay bulshada rayidka aaminsantahay in ay ku hayso faragalin qaawan oo lidi ku ah xoriyada hadalka iyo hanaanka qabashada doorashada koonfur Galbeed.
Keenistii ciidanka ka socda dowladda dhexe ee Baydhabo, dib u dhigista markii afaraad doorashada dhici lahayd 5 ta December ayaa laba jibaaray caradii dadka iyadoo ay horay u jirtay caburin lagu hayay dadka oo lagu hor istaagay dibad baxyo nabadeed oo ay kaga soo horjeedeen faragalinta dowladda oo booliska iyo militariga kala cayriyeen iyo xaflado ay ku taageerayeen musharaxa ay rabaan oo sidoo kale loo diiday in ay qabsadaan.
Ururada haweenka oo ka caraysan gacan bidxaynta Dowladda dhexe iyo awooda ay ku maquuninayso bulshada iyo xoriyadeeda ciidamada laga soo qaaday Muqdisho iyo dib u dhigista doorashada ayaa ku kulmay Baydhabo. Muraayo Mad deer iyo Xaawo Sokor Cali oo oo kala hogaamiyo Haweenka Gobolka iyo Degmada ayaa fariintan u diray Dowladda.
Xildhibaan Cabdi Shakuur Buule waa Gudoomiyaha gudiga amniga Baarlamaanka Koonfur Galbeed waxaa uu Ayaan daro ku tilmaamay in tiro dhoowr jeer ah dib u dhacdo doorashada KG, waxaa kaloo xadgudub uu ku sheegay in ciidamo ka socda iyadoo aan lagala tashan baarlamaanka KG gaar ahaan gudiga Amniga.
Sidoo kale waxaa uu xildhibaanka ku eedeeyay cawaaqib xumada ka dhalata ciidamadan la keenay in ay mas’uuliyadeeda qaadi doonaan wasiirka Amniga iyo madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya, isagoo wasiirka ka dalbaday in uu horyimaado baarlamaanka.
Hadda doorashadii mar afaraad ayay dib u dhigeen gudiga, waxaana ay sheegeen in ay doorashada dici doonto 19 ka bishan December oo iyadoona ay gudiga ka cudar daarteen dib u dhigis kolkan doorashada yay tilmaameen in ay ahyd mid ay ku fursan waayeen sababo dhinaca farsamada aawgeed, balse taasi ma noqonin mid u cuntanta bulshada, waxaase laga wardhoowrayaa balanta cusub ee gudiga iyo sida ay u fuli doobnto.
Akriso+Sawiro:-Doorashada Koonfur Galbeed iyo Dareenka dadka (Warbixin) was last modified: December 2nd, 2018 by Ateera